Nwere ike anyị nwere ike iji roket launcher na ọhụrụ PUBG Mobile mode? | Gam akporosis
Site na akaụntụ Twitter gọọmentị, PUBG Mobile mbata nke ọnọdụ ọhụrụ akpọrọ Payload na nke ahụ, site na ihe enwere ike ịkọwa site na onyogho ejiri, ọ ga-enye anyị mpempe ihe rọketi ihu onye iro ahụ.
Anyị amaghị ihe ọ bụla ọzọ, ebe ọ bụ na ihe niile ahapụla ihe omimi na nkwenye; á »bá» beta beta beta 0.14.5 á »bá» even na e wepá », tara, ma nke e nwere ihe dá» ‹ohuru ihe ohuru. Ọ na-adọ aka ná ntị na-esonụ na-emelite nke beta ga-abata ngwa agha ohuru na ugbo ala ohuru.
1 Vehiclesgbọ ala ọhụrụ? Onye helikopta?
2 Ihe oyiyi nke esemokwu
3 New oge na anya
Vehiclesgbọ ala ọhụrụ? Onye helikopta?
Na nsụgharị ndị ọhụrụ pụtara magically a ọtụtụ helikọpta tinyere na obosara nke map Erangel. Na Pochinky, otu n’ime ebe ndị egwuregwu na-agakarị ma bụrụ ndị mmadụ bi na ya, otu nnukwu helikọpta pụtara dị ka “ndị mgbutu” ahụ sitere na Vietnam War
Na dị ka ihe mere ndị zombies, tupu usoro ọhụrụ ndị anyị na-anụ ụtọ taa na ìgwè ndị mmadụ na ọbụlagodi ngwa ngwa, ụfọdụ ozu ndị a na-eme mkpagharị n'ụsọ osimiri Erangel. Ọ bụ ụdị nkọwa maka ihe na-abịara anyị, yabụ site na ihe anyị nwere ike ịkọ, ọ ga-abụ ihe ijuanya ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnya ụgbọ helikọpta, ma ọ bụ kama ibibi otu ndị agha na-akpaghị aka.
Naanị ka ọ dịịrị anyị n'ihi na ọ dị mgbagwoju anya ijikọta ụgbọelu ikuku, na enwere asịrị mgbe niile na Tencent Games na-achọ ụzọ iji jikọta ụzọ ndị ọzọ ịmalite egwuregwu ahụ dịka ụdị nke ọkpụkpọ ọ bụla. Echere m, ọ bụrụ na ịchọrọ ịdaba "ntụpọ ọkụ," ị ga-aga helikopta ndị ahụ ozugbo. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị masịkwuo ọhịa, ndị ọzọ ga-ahapụ gị ka ị daa n'oké ọhịa na n'oké ọhịa.
Ihe oyiyi nke esemokwu
Ruo taa, ọgụ a ka dị n'elu elu, belụsọ ị ga - ewere ngwa ngwa na Pochinky na ị ga-arara onwe gị nye iji gbaa ma kpochapụ ndị egwuregwu ahụ na-agbadata na parachute ha dị nwayọ nwayọ. N'aka ozo, anyi enwebeghi ike ichikota ugbo ala nke na-efe ma kwe ka udiri usoro ndi ozo.
Ihe oyiyi e nyere nke PUBG Mobile si ya na akaụntụ Twitter awade a doro nnọọ anya oyiyi ebe ị na-ahụ a fighter ji ya rọk launcher, na-eduzi a ọma shot na a helikọpta, kama obere. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka ala> ọgụ ikuku site na ihe anyị nwere ike ịhụ, ọ bụ ezie na akụkụ dị mma nke akụrụngwa ahapụkwara helikọpta ahụ ka ọ gbaa.
Kedu ee nke ahụ anyị anaghị ahụ ebe ọ bụla bụ nnukwu helikopta ahụ na ị nwere ike ịhụ ugbu a, ọ bụrụ na igwu egwuregwu, na Pochinky na nke ndị otu egwuregwu ga - efe. Ọzọkwa, dị ka ọ bụ ọnọdụ ọhụrụ, na PUBG a ị ga-enwe ike ịnweta egwuregwu ndị a ma ama ebe ndị egwuregwu ahụ na ndị egwuregwu 100 na-eche ihu n'enweghị ahụhụ ọ bụla; ọ bụ ezie na ndị ahụ ọtụtụ bots.
New oge na anya
Ihe niile kwuru rute ugbua ka ekwuru na echiche site na onyonyo nke PUBG Mobile kesara, mana ịmara na anyị nọ ụbọchị abụọ site na njedebe nke oge nke itoolu, ụbọchị ndị na-esote ga-abụ oke osimiri nke ọ funụ maka betas ọhụrụ ahụ na Royale Pass nke ga-enyere anyị aka ịmalite agbụrụ anyị maka ị nweta ọkwa 100.
Thatbụ na dị ka ọ nwere ike, na ihe oyiyi enwewo ike ịkpalite atụmanya dị ukwuu na-achọsi ike ịmara ihe egwuregwu Tencent na-aga. Ọhụrụ kemgbe ndị zombie ụdịdị ahụ na ndị ngwa ngwa 4v4 egwuregwu. Ugbu a, anyị ga-ahụ ihe ọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ tinye anyị n'ụzọ zuru ezu n'ime ala> ikuku na ikuku> ọgụ ala.
Anyị ga-ahụ ihe na-eme na ụbọchị ole na ole sochirinụ Nọrọ na-ege ntị maka ihe osise PUBG Mobile ọzọ na ihe ga - abu roket launcher na ndi anakpo ugbo ala. Tencent iju anyi anya, n'ihi na o gha etinye ezigbo icing na achicha nke di n'ime onwe ya agha a royale.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » PUBG Mobile na-ekwupụta Ọnọdụ Payload New: Anyị Ga-eji Ndị Na-ebugharị Rọketị? Anyị ga-efe helikọpta?